I-HSE, injini yokugcina yomthombo ovulekile, elungiselelwe i-SSE ye-SSD | Kusuka kuLinux
I-HSE, injini yokugcina yomthombo ovulekile, elungiselelwe i-SSE ye-SSD
Micron Technology (inkampani ekhethekile ekukhiqizeni i-DRAM ne-flash memory) kukhishwe ukwethulwa kwe- injini entsha ebizwa "HSE" (Heterogeneous-memory Storage Engine), eyakhiwa ngenhloso yokusetshenziswa engqondweni kuma-drive we-NAND flash based SSD (X100, TLC, QLC 3D NAND) noma imemori yokufunda kuphela (i-NVDIMM).
Injini yenziwa ngendlela yelabhulali ukufaka kwezinye izinhlelo zokusebenza futhi isekela ukucutshungulwa kwedatha ngefomethi yenani lokhiyer. Ikhodi ye-HSE ibhalwe ngo-C futhi isatshalaliswa ngaphansi kwelayisense le-Apache 2.0.
Phakathi kwezicelo zemoto, izinhlelo zokusebenza zokugcina idatha ezisezingeni eliphansi kuyashiwo ku-NoSQL DBMS, izindawo zokugcina izimpahla zesoftware (i-SDS, isitoreji esichazwe ngesoftware) njengeCeph ne-Scality RING, amapulatifomu wokucubungula inani elikhulu ledatha (i-Big Data), ama-high-performance computing systems (HPC), amadivayisi we-Intanethi wezinto (IoT) kanye izixazululo zezinhlelo zokufunda ngomshini.
I-HSE ayenzelwe kuphela ukusebenza okuphezulu, kodwa futhi nokuqinisekisa ukuqina kwezinhlobo ezahlukahlukene zokushayela kwe-SSD. Ijubane elikhulu lafinyelelwangemodeli yokugcina eyi-hybrid: idatha efanelekile ibekiwe, kunciphisa inani lokufinyelela kwediski.
Njengesibonelo sokuhlanganisa i-injini entsha kumaphrojekthi wezinkampani zangaphandle, kwalungiswa uhlobo oluqondiswe kumadokhumenti lwe-MongoDB DBMS, eyahunyushelwa ukusebenzisa i-HSE.
Ngokobuchwepheshe, i-HSE kusekelwe kwimodyuli eyengeziwe ye-kernel mpool, esebenzisa isikhombimsebenzisi esibonakalayo sokugcina izinto zamadrayivu wombuso oqinile, kucatshangelwa amakhono nezimpawu zazo, okuvumela ukuthola izici ezihluke ngokuphelele zejubane nokuqina. IMpool futhi iyintuthuko ye-Micron Technology evulwe kanyekanye ne-HSE, kodwa ivelele njengephrojekthi ehlukile yengqalasizinda. IMpool isebenzisa ukusetshenziswa kwememori eqhubekayo nokugcinwa kwendawo, kepha okwamanje kusekelwa ama-SSD endabuko kuphela.
Ukuhlolwa kokusebenza kwephakeji le-YCSB (Yahoo Cloud Serving Benchmark) ikhombise ukwanda okukhulu kokusebenza lapho kusetshenziswa isitoreji se-2TB ngokucutshungulwa kwedatha ye-1KB. Ukwanda kokusebenza okuphawuleka kakhulu kuyabonakala esivivinyweni ngokusatshalaliswa kwemisebenzi yokufunda nokubhala.
Isibonelo, IMongoDB enenjini ye-HSE kuvele ukuthi iphindwe cishe ama-8 kunenguqulo enenjini ejwayelekile yeWiredTiger, nenjini yeR RockDB DBMS idlule i-HSE ngaphezu kwezikhathi eziyi-6. Izinkomba ezinhle kakhulu ziyabonakala ezivivinyweni, ezibonisa imisebenzi engama-95% yokufunda kanye no-5% wezinguquko noma okungeziwe.
Olunye uvivinyo olwenziwe lubandakanya ukusebenza okufundwayo kuphela, kukhombisa inzuzo engaba ngama-40%. Ukwanda kokusinda kwama-SSDs ngesikhathi sokubhala kuqhathaniswa nesisombululo esise-RocksDB kulinganiselwa ukuthi kube izikhathi eziyi-7.
Izici ezibalulekile ze-HSE:
Ukusekelwa kwama-opharetha ajwayelekile futhi athuthukile ukucubungula idatha ngefomethi yokhiye / yenani;
Ukusekelwa okuphelele kokuthengiselana kanye namandla okuhlukanisa izingxenye zesitoreji ngokwakha izifinyezo (izifinyezo zingasetshenziswa futhi ukugcina amaqoqo ahlukile esitolo).
Amandla wokusebenzisa izikhombisi ukudabula idatha kuzethulo ezisuselwe kuzithombe.
Imodeli yedatha elungiselelwe izinhlobo zomthwalo ezihlanganisiwe endaweni yokugcina eyodwa.
Izindlela eziguquguqukayo ukuphatha ukuthembeka kwesitoreji.
Izikimu zokwenziwa kwedatha ezenziwe ngokwezifiso (ukusatshalaliswa ngezinhlobo ezahlukahlukene zememori ekhona endaweni yokugcina izinto).
Umtapo wezincwadi one-C API engaxhunyaniswa ngamandla kunoma yiluphi uhlelo lokusebenza.
Amandla wokukala kuma-terabyte wedatha namakhulu ezigidigidi zokhiye kwisitoreji.
Ukusebenza okusebenzayo kwezinkulungwane zemisebenzi efanayo.
Ukwanda okuphawulekayo komkhawulokudonsa, ukunciphisa ukubambezeleka, nokukhuphuka kokufunda / ukubhala kwezinhlobo ezahlukahlukene zomthwalo womsebenzi kuqhathaniswa nokusebenza okujwayelekile.
Amandla wokusebenzisa amakilasi ahlukene ama-SSDs kusitoreji esifanayo ukukhulisa ukusebenza nokuqina.
Ungangena ikhodi yenjini kusuka kusixhumanisi esingezansi.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » I-HSE, injini yokugcina yomthombo ovulekile, elungiselelwe i-SSE ye-SSD